मिडिया विशेष बीपीसँग सहयोग लिएर ‘समीक्षा’ निकालेँ : मदनमणि दीक्षित
‘समीक्षा’मा प्रकाशित सामग्रीहरूको आधारमा तत्कालीन प्रशासकले पटक–पटक बयान लिने र प्रतिबन्धसमेत लगाउने, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दौडधुप गर्नुपर्नेजस्ता तीता यथार्थ झेलेका दीक्षित पछिल्लो समय भने वैदिक साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा जुटे । ‘माधवी’ उपन्यासका स्रष्टा दीक्षितले वैदिक वाङमयमा आधारित तीन दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशन गरिसकेका छन ।
प्रेस चौतारीलगायत संस्थाहरूले गरिरहेको तर्क के हो भने २००८ सालमा सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले ‘नेपाल पत्रकार संघ’ गठन गरेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही संस्थालाई ०१२ सालमा पुनर्गठन गरेका हुन् । यो तर्कलाई पुष्टि गर्न गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’को एउटा पृष्ठको फोटो र श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा २७ पुष ००९ मा बसेको पत्रकार संघको बैठकबारे गोरखापत्रमा छापिएको समाचारको कटिङ पेस गर्ने गरिएको छ
वास्तवमा म मिडिया व्यवसायलाई व्यक्तिगत सफलताको रुपमा होइन, समाजलाई त्यसले के योगदान पुर्‍यायो भन्ने अर्थमा बुझ्छु । तर मानिसहरू यसलाई व्यक्तिगत सफलतासँग जोडेर हेर्छन् । मेरो सोच र आम बुझाईबीचको अन्तर नै यही हो । हामीले गरेको कामले समाजमा के कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने आधारमा हामीले सफलता/असफलतालाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
१८ वर्षअघि नेपालको समाचार थाहा पाउन पाठकसँग एकमात्र अनलाइन विकल्प थियो, ‘नेपाल न्युज डट कम’ । हाल बन्द भइसकेको यही वेबसाइटमा सरकारी गोरखापत्र र राइजिङ नेपालदेखि निजी पत्रिका कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्ट अनि नाम चलेका सबै साप्ताहिक पत्रिका यसैमा पढ्न पाइन्थे । त्यसो त नेपाल न्युजले आफैंले समाचार पनि राख्ने गथ्र्यो तर त्यो अंग्रेजी भाषामा र एकदमै संक्षिप्त हुने गथ्र्यो । पछि त बीबीसी नेपालीदेखि लिएर एफएमहरूसमेत यसैमा सुन्न पाइने भयो । नेपालको अनलाइन न्युज ‘एग्रिगेटर’का रूपमा यो वेबसाइट रह्यो ।
११ तस्बिरमा हेर्नुहाेस् समाचार संसार (फाेटाेफिचरसहित )
यत्तिका माध्यमहरू छन्, तै पनि समाजमा अखबारको आफ्नै शानमान छ । बिहानै चियाको चुस्कीसँगै अखबार पढ्ने जमात उस्तै छ । हरेक दिन छापिने अखबार कस्ता कस्ता प्रक्रिया पार गरेर पाठकको हातसम्म पुग्छ भन्नेमा तपाईंको जिज्ञासा हुन सक्छ । हामीले यहाँ अन्नपुर्ण पोस्टको उत्पादनदेखि वितरणसम्मको त्यही प्रक्रियालाई सिलसिलेवार देखाउने जमर्को गरेका छौं ।
राजनीति चुनावी दाउमा ठूला नेताको प्रतिष्ठा अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, कार्तिक १२, २०७४
दृष्टिकोण वाम गठबन्‍धन : सतहमा वामपन्थ, अन्तर्यमा दक्षिणपन्थ ? अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, आश्विन २९, २०७४
नयाँ पुस्ता ट्याटुमा खोपिएको मन अन्‍नपूर्ण टुडे सोमवार, कार्तिक १३, २०७४
अर्थ/बाणिज्य सडक विस्तारको काम कहिले सकिन्छ ? अन्‍नपूर्ण टुडे सोमवार, आश्विन ३०, २०७४
रिपोर्ट समस्यामा पत्रकार महिला अन्‍नपूर्ण टुडे मंगलवार, कार्तिक २१, २०७४
आवरण नागरिक स्वरकाे खाेजी अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
समृद्धि सपना कपाल काटेरै लखपति अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, कार्तिक १२, २०७४
कृषि गहुँंको गुदी छाम्दै वैज्ञानिक अन्‍नपूर्ण टुडे बुधवार, चैत्र २, २०७३
समाज / जीबनशैली
साहित्‍यकार इसिगुरोको पुस्तक–यात्रा किरण दहाल
नीतिगत भ्रष्टाचार झन् खतरनाक किरण दहाल
सरिता तिवारी, कवि सिफारिस
गोपाल प्रसाद रिमाल : आमाको सपना : रिमाल मूल रूपमा क्रान्तिका कवि हुन् भन्ने दस्तावेज हो, यो कृति । यसमा चेतना यति बलियो लाग्छ कि आजका कविहरू महानदी पछ्याउँदै बग्ने फुच्चे खोला मात्र हौं ।
म गुराँस हुँ मंगलवार, माघ ४, २०७३